Free BF Smart Scalper EA - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
Ity dia dikan-teny maimaim-poana tanteraka BF Smart Scalper Expert Advisor.
Ny zava-manan'aina rehetra dia tsotra tsotra. BF Smart Scalper EA dia tsotra, saingy mifototra amin'ny fitsipi-barotra manara-penitra indrindra satria misy ny tsena - miditra an-tsena amin'ny làlana mankany amin'ny tsindry ara-barotra mafy, aorian'ny fanitsiana ara-drariny. Ao anatin'io fitsipika ara-barotra io no misy ny psikology lalina ao am-pontsika, izay tsy hiova mihitsy. Ny tanjona dia ny mitazona izany BF Smart Scalper EA toy ny mahazatra araka izay azo atao mba hisorohana ny fitongilanana, izay fahavalo lehibe indrindra amin'ny varotra EA.
Fivarotana 24 / 5, tsy misy fe-potoana voafetra - tsy misy ny disadisa fanovàna GMT
TP sy SL izay mampihetsi-po
Fomba maromaro momba ny rafi-pitantanana - mora ny fanatsarana ary tsy misy fiantraikany amin'ny fitaintainana.
Torolalana sy toro-hevitra
Azonao ampiasaina Auto MM = 2% (risika ambany) hatramin'ny 10% (risika goavana), araka ny hevitry ny kaontinao sy ny mety hitrangan'izany.
Azo atao ny mampifanaraka ny habetsaky ny loto ny 0.05 amin'ny balan'ny kaonty 1k, na ny 0.5 betsaka amin'ny balan'ny kaonty 10k.
Ho fehiny, raha mampiasa kiraro maromaro ianao dia tokony handinika ny fihenan'ny risika mifanaraka amin'izany.
Vondrona paika fanohanana: GBPUSD, EURUSD, USDCHF
Ny votoatin'ny default dia ho an'ny GBPUSD. Azo ampiasaina amin'ny paosim-bola hafa koa io robot io.
Azonao atao ny mihazakazaka ny EA M1 or M15 drafitra - tsy misy fahasamihafana amin'ny EA, satria sarotra ny fotoana rehetra ampiasaina.
Azonao atao ny manamboatra sy manatsara ny EA amin'ny tabilao M1 amin'ny fomba "vidin-javatra fotsiny" - izany dia ampy tsara ary hamonjy anao betsaka.
Farany, azafady, tadidio fa tsy misy ny Grails Masina amin'ny varotra! Na ny rafitra tsara indrindra aza dia maharary fotoana ratsy. BF Smart Scalper EA dia mampiasa SL, izay mety hitranga / mety hiverimberina / amin'ny toe-javatra ratsy.
Magic - isa majika - dia zava-dehibe tokoa ny mihazona an'io karazany hafa ho an'ny robots rehetra io
EA_Comment - lahatsoratra apetraka ho fanehoan-kevitra momba ny varotra
MaxSpread - fiparitahana mety indrindra
Slippage - slippage tsara indrindra avela
StopLoss - ajanony ny sandan'ny fahaverezan'ny fatiantoka 4 mahazatra - sakana mahasoa 30-100, mifantina. dingana 5
TakeProfit - maka ny sandan'ny tombom-pahalalana marika 4 mahazatra - sakana mahasoa 5-30, mifantina. dingana 1
BandPeriod - vanim-potoan'ny tariby Bollinger - laharam-pahamendrika mety 5-20, opt. dingana 1
BandBreakEntry - fihenam-bidy amin'ny tarehimarika nomeraon'ny 4 amin'ny tsipika BB mba hanombohana varotra mifanohitra (ny sandany dia mety ho ratsy) - anton-javatra mety misy 0-5, opt. dingana 1
BandBreakExit - fihenam-bidy amin'ny tarehimarika 4 amin'ny sisin'ny BB mifanohitra mba hanombohana ny fanakatonana ny varotra efa misy (mety ho ratsy ny sandany) - anton-javatra mitombina azo itokisana (-5) ho 5, opt. dingana 1
MA_Fast_Period - vanim-potoana haingam-pandeha haingam-pandeha - isan-karazany misy lanjany 1-20, opt. dingana 1
MA_Slow_Period - fe-potoana mihetsika miadana miadana - isan-karazany ara-drariny 20-120, opt. dingana 5
Trend_Impulse - tanjaky ny tsimok'aretina eo amin'ny tsena - optim-bidy mitaky 0-60 opt. dingana 5